The Essence: စွယ်တော်လေးဆူ၊၊ ၊၊
ဦးဇင်း ဒကာမကြီးကို မြတ်စွာဘုရား စွယ်တော်တွေအကြောင်းကို ရေးပေးမယ်လို့ တလောက ပြောမိတယ်၊၊ အဲဒါအခု ကျောင်းပိတ်ထားတော့ အချိန်နည်းနည်းအားလို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်၊၊ မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်တာကနေ စပြောရအောင်ပါ ဒကာမကြီး၊၊
မြတ်စွာဘုရား ခန္ဓာတော်ကို မီးပူဇော်အပြီးမှာ စွယ်တော်လေးဆူနဲ့ ဓာတ်တော်ရှစ်စိတ်၊ ရှစ်ပြည်ကြွင်းကျန်ရစ်တယ်လို့ ပိဋကတ်စာပေမှတ်တမ်းမှာ တွေ့ရပါတယ်၊၊ စွယ်တော်လေးဆူဆိုတာက:
(၁) အထက်လက်ယာ စွယ်တော်
(၂) အထက်လက်ဝဲ စွယ်တော်
(၃) အောက်လက်ယာ စွယ်တော်
(၄) အောက်လက်ဝဲ စွယ်တော် …..လို့ စွယ်တော်လေးဆူရှိပါတယ်၊၊
စွယ်တော်များကို အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်က မင်းတွေက စစ်ပြုပြီး လုယူကြမယ်လုပ်နေတုန်းမှာ အဲ့ဒီမင်းတွေကို ငယ်စဉ်က ပညာသင်ပေးဘူးတဲ့၊ အားလုံးက လေးစားကြောက်ရွံ့ ရိုသေရတဲ့ ဒေါဏ အမည်ရှိတဲ့ ပညာရှိအမတ်ကြီးက ဓာတ်တော်များကို ဝေငှဖို့အားလုံးက သဘောတူကြ ပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊
ဒေါဏအမတ်ပညာရှိကြီးဟာ ဓာတ်တွေများကို ဝေငှတဲ့အခါမှာ စွယ်တော်များကို မဝေပေးဘဲ ၀ှက်ထားပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊ ဓာတ်တော်တွေကို ဝေတဲ့အခါမှာ ရွှေပြည်တောင်းနဲ့ ချင့်ပြီး ဝေတယ်လို့လဲ မှတ်တမ်းမှာ လေ့လာရပါတယ်၊၊
အဲဒီတော့ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်က မင်းတွေကလလည်း ဘယ်သူ့အထဲ စွယ်တော်တွေပါသွားလဲ မသိတော့ဘူးဆိုပါတော့ ဒကာမကြီး၊၊ အဲဒီလျို့ဝှက်ချက်ကို သိတဲ့ သိကြားမင်းက အထက်လက်ယာ စွယ်တော်တို့ တန်ခိုးနဲ့ ယူပြီး တာဝတိံသာ နတ်ပြည်က စူဠာမဏိစေတီတော်ကြီးမှာ ဌာပနာလိုက်ပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊
အထက်လက်ဝဲစွယ်တော်ကိုလည်း ရဟန္တာမထေရ်တစ်ပါးက တန်ခိုးတော်နဲ့ ပင့်ပြီး၊ သူ့တိုင်း ပြည်ဖြစ်တဲ့ ဂန္ဓာရတိုင်းဘုရင်လက်ထဲကို အပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊ ဂန္ဓာရတိုင်းဆိုတာ အခုလက်ရှိ ပါကစ္စတန်ကို ပြောတာပါ၊၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ တရုပ်ပြည်က ပြည်နယ်ချင်း စပ်နေတာပါ၊၊
အဲဒါကြောင့် သူမြေကိုယ်က လုလိုက်၊ ကိုယ့်မြေသူကလုလိုက်နဲ့ နှစ်တွေထောင်ချီကြာလာတဲ့အခါမှာ အထက် လက်ဝဲ စွယ်တော်ကို ဌာပနာထားတဲ့ စေတီကြီးတည်ရှိတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်လို တောင်ကြောကြီးဟာ တရုပ်နယ်မြေထဲကို ရောက်လာပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစေတီကြီးထဲမှာ စွယ်တော်အစစ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ မသိကြဘူးပေါ့၊၊
စစ်ဘေး စစ်ဒဏ် တွေခံခဲ့ရတာရော၊ နှစ်ပေါင်း ကြာလာတာရောကြောင့် တနေ့မှာ အဲဒီစေတီကြီးဟာ ပြိုကြလာပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊ စေတီကြီး ပြိုကလာတဲ့အထဲမှာ ရှာကြဖွေကြတော့ ဌာပနာကြုပ်ကြီးတခုကို တွေ့ကြပါတယ်တဲ့၊၊
ဌာပနာကြုပ်ကြီးကို ဘုရင်လက်ဆက်သပြီး ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘာသာစကား သုံးမျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ ကမ္ဗည်စားတမ်းကို တွေ့ရပါတယ်တဲ့၊၊ အဲဒီစာတမ်းအရ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ စွယ်တော်အစစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး ယနေ့အထိ တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ ကိုးကွယ်နေကြပါတယ် ဒကာမကြီး၊၊
မြန်မာနိုင်ငံကိုတောင် အပူဇော်ကြွဘူးတာကို ဒကာမကြီး သိမှာပါ၊၊ အဲဒါ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အထက် လက်ဝဲ စွယ်တော်ပေါ့ မယ်တော်ကြီး၊၊ အဲဒီစွယ်တော်ကို အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အရိုးပညာရှင်တွေရော၊ ဂျာမန်ပညာရှင်တွေရော အကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးတာ တကယ့် လူသားတယောက်အရဲ့ အရိုးဓာတ်တော် ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်းလဲ နှစ်ထောင်ကျော်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုကြပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊ စွယ်တော်ပုံကို အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို ဒကာမကြီးဆီ ဦးဇင်းပို့ထားပြီးပါပြီ၊ ထပ်ဖူးလိုက်ပါအုံး မယ်တော်ကြီး၊၊
နောက်ထပ် အောက်ပိုင်းလက်ယာ စွယ်တော်ကိုတော့ ဒေါဏအမတ်ကြီး ၀ှက်ထားတဲ့နေရာကနေ နဂါးပြည်က နဂါးမင်းက တန်ခိုးနဲ့ယူပြီး နဂါးပြည်မှာ ရတနာစေတီတည်ပြီး ကိုးကွယ်ပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊
နောက်ဆုံးကျန်နေသေးတဲ့ အောက်ပိုင်း လက်ဝဲစွယ်တော်ကိုတော့ အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ တပည့် အရှင်ခေမာလို့ ခေါ်တဲ့ ရဟန္တာမထေရ်မြတ်က ဒေါဏအမတ်ကြီး ၀ှက်ထားရာကနေ တန်ခိုးတော် နဲ့ယူပြီး သူနေတဲ့တိုင်းပြည်က ဘုရင်ဗြမ္မဒတ္တကို ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊
အဲဒီတိုင်းပြည်နာမည်က ကလိင်္ဂတိုင်း ဒန္တပူရပြည်နယ်လို့ စာပေမှတ်တန်းမှာတွေ့ရပါတယ်၊၊ လက်ရှိ အန္ဒိယနိုင်ငံ သြဒိဿပြည်လို့ ဆိုပါတယ်၊၊ မင်းအဆက်ဆက် ပြည်သူအဆက်ဆက် ကိုးကွယ်ကြပြီး နှစ်ပေါင်း (၆၃၀)ကြာလာတဲ့အခါမှာ ကလိင်္ဂတိုင်းကို ဂူဟသီဝဆိုတဲ့ ဘုရင်အုပ်ချုပ်ပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊
အဲဒီဘုရင်လက်ထက်မှာ စစ်တွေအကြီးကြယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် စွယ်တော်ကို တိုင်းတပါးသားတွေ လက်ထဲရောက်မဲ့ ဘေးမျိုးအထိဆိုက်လာပါတယ်တဲ့ မယ်တော်ကြီး၊၊ အဲဒါကြောင့် မင်းကြီးက သူ့သမီးတော် ဟေမမာလာနဲ့ မားမက်တော်ကို စွယ်တော်ကိုပင့်ပြီး တိုင်းပြည်ကထွက်ဖို့ မိန့်တော် မူပါတယ်တဲ့ မယ်တော်ကြီး၊၊
စွယ်တော်ကိုပင့်ပြီး လင်္ကာဒီပ သီဟိုဠ်ကျွန်းကို ထွက်ပြေးဖို့၊ သီဟိုဠ် ကျွန်းရောက်တဲ့အခါ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မဟာသေနမင်းကို အကျိုး အကြောင်းလျောက်တင်ပြီး စွယ်တော်ကို အပ်နှံဖို့ သမီးတော်နဲ့ သားတော်ကို မှာလိုက်ပါတယ်တဲ့၊၊
သားတော်နဲ့ သမီးတော်တို့ဟာ ကုန်းအတန်တန် ရေအတန်တန်ဖြတ်ကျော်ပြီး သီဟိုဠ်ပြည်ကို ထွက်ပြေးလာကြပါတယ်တဲ့ ဒကာမကြီး၊၊ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှချင်တော့ သီဟိုဠ်ပြည်လဲ ရောက်ရော သူတို့ခမည်းတော် ကြီးမှာလိုက်တဲ့ မဟာသေနမင်းကြီး နတ်ရွာစံကံတော်ကုန်တာနဲ့ တွေ့ရပါတယ်တဲ့၊၊
ဒါပေမဲ့ မဟာသေနဘုရင်ကြီးရဲ့အရိုက်အရာကို ဆက်ခံတဲ့ သားတော် သီရိမေဃ၀ဏ်ဏ ရှင်ဘုရင်ဟာလည်း သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုလေးမြတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့် စွယ်တော်ကို သူ့ဆီအပ်နှံပြီး သီရိလင်္ကာ=သိဟိုဠ် မင်းအဆက်ဆက၊် ပြည်သူအဆက်ဆက် ကိုးကွယ်လာတာ အခုထက်ထိ ဆိုပါတော့ ဒကာမကြီး၊၊
ဒါကြောင့် စွယ်တော်လေးဆူမှာ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ စွယ်တော်တစ်ဆူနဲ့၊ နဂါးပြည်ရောက်သွားတဲ့ စွယ်တော်တစ်ဆူကတော့ ဦးဇင်းတို့ မယ်တော်ကြီးတို့ ဖူးခွင့်ရဖို့ မဖြစ်နိုင် ဘူးဆိုပါတော့ဗျာ၊၊
လူ့ပြည်မှာ ကျန်နေတဲ့ တရုပ်ပြည်က စွယ်တော်နဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက စွယ်တော်ကတော့ ကျိုးစားရင် ဖူးခွင့်ရဖို့ မခက်ဘူးဆိုပါတော့ ဒကာမကြီး၊၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို စွယ်တော်လာဖူးတဲ့ ကမ္ဘာက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုက်သူတွေရော၊ မဟုက်သူတွေရော အမြဲစည်ကား နေတာကို ဦးဇင်းတို့ တွေ့နေရပါတယ်၊၊
စွယ်တော်ကြုပ်ကိုတော့ နေ့စဉ် တနေ့ကို နှစ်ကြိမ်ဖွင့်ပါတယ်၊၊ စွယ်တော်ကိုတော့ လေးနှစ်မှ တစ်ကြိမ်ဖွင့်ပါတယ် ဒကာမကြီး၊၊ အဲဒါကြောင့် စွယ်တော်ဖွင့်တဲ့ နှစ်ကြရင် မြန်မာပြည်ကလည်း စွယ်တော်ကိုလာဖူးကြပါတယ်၊၊
ဒကာမကြီးလဲ မြတ်စွာဘုရား စွယ်တော်ကို ဖူးခွင့်ရအောင် ဆုတောင်းပြီး ကျိုးစားပေါ့ဗျာ၊၊ ဦးဇင်းတော့ ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီး လပိုင်းလောက်မှာပဲ စွယ်တော်ကြုပ်ဖွင့်ပြတဲ့ လေးနှစ်ပြည့်နဲ့ ကြုံတာကြောင့် စွယ်တော်ကို အနီးကပ်ဖူးခွင့်ရပါတယ်၊၊ ဘ၀မှာလူဖြစ်ကျိုးနပ်တယ်လို့ကို ကြည်နူးမိတာ အမှန်ပါ ဒကာမကြီး၊၊
ဒကာမကြီး စွယ်တော်လေးဆူအကြောင်း စာတမ်း ဒါဆိုပြည့်စုံပါပြီ၊၊ အခုလောက်ရေးဖို့ စွယ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျမ်းများစွာကို လေ့လာရပါတယ် ဒကာမကြီး၊၊ ဦးဇင်းအထင်နဲ့ ရေးတာ မဟုက်ပါဘူး၊၊
နီးစပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုရော ရေးထားတဲ့ စွယ်တော်လေးဆူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကနေမှ အဖြစ်နိုင်ဆုံးတွေကို ယူပြီး ဒီစာတမ်းလေးကို ရေးပေးလိုက်တာပါ၊၊ စွယ်တော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေကြတာတွေက အများကြီးပါ၊၊
သူ့စွယ်တော်က စစ်တယ်၊ ငါ့စွယ်တော်က စစ်တယ်ဆိုပြီး ငြင်းနေကြတာဆိုပါတော့ ဒကာမကြီး၊၊ အခု ဦးဇင်း ရေးပေးလိုက်တဲ့ စွယ်တော်လေးဆူကတော့ ကမ္ဘာကလက်ခံတဲ့ စာပေမှတ်တမ်းများမှာလဲ တကယ်ပါတဲ့ စွယ်တော်လေးဆူပါ၊၊
မယ်တော်ကြီး စွယ်တော်အကြောင်းကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး၊ စွယ်တော်တွေကို ဖူးခွင့်ရပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဘေးရန်ကင်းပြီး၊ နိဗ္ဗာန်ရပါစေ………………
Posted by အလင်း စက် at 9:34 AM
sitagustar December 23, 2011 at 7:07 AM
စွယ်တော် ၄ ဆူအကြောင်း ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ဘုရား
THANDAR May 29, 2013 at 11:39 PM
Sayar daw pha yar,
I would like to plan to worship tooth relic when open to see once every four years. May I know when it is coming. Is it called as "Esala Perahera".
chan myae aung July 26, 2016 at 1:35 AM
လိုလားနှစ်သက် အရခက်၊၊ ၊၊
သစ်လွင်ဆဲခေါင်းလောင်းသံ (သို့) ...
အချစ်ကို ဘယ်လိုပြောရမယ်၊၊ ၊၊
မယ်တော်မွေးနေ့ တရားလက်ဆောင်၊၊ ၊၊